Fandaminana fifamoivoizana Manomboka malalaka ny eny Analamahitsy
Nitondra fandaminana vaovao ny polisim-pirenena hanalefahana ny fitohanan'ny fifamoivoizana eny amin'ny faritra Analamahitsy sy ny manodidina.
Araka izany dia
natao ho lalana azo handrosoana fa tsy azo hiverenana (sens unique) ny eo anelanelan’ny tobim-pivarotan-tsolika Galana sy ny Total Analamahitsy. Nomena vahana kosa ny fiara miditra avy any amin’ny lalam-pirenena fahatelo hamonjy ny renivohitra. Misy fotoana ihany koa atao lalana azo handrosoana sady azo hiverenana (double sens) ny eo amin'ny Galana mihazo an'i Masay sy ny avy eo Masay mihazo an’i Galana. Nesorina ireo fiara mihantsona eny amin’ny sisin-dalana, nakisaka koa ny fihantsonan’ny taksibe mba hialana amin’ny fitohanana eo amin’ny Galana Analamahitsy. Nanomboka ny alatsinainy teo no nanaovana ny fandaminana ary ny polisy misahana ny fifamoivoizana sy ny polisin’ny boriborintany fahavalo no manatanteraka ny asa. Malalaka tsara ny lalana mizotra mankany Analamahitsy amin’izao.